Wharf Hotels inozivisa VP nyowani yekutengesa uye Kushambadzira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Wharf Hotels inozivisa VP nyowani yekutengesa uye Kushambadzira
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hong Kong Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Wharf Hotels anofara kuzivisa kusarudzwa kwaHolger Jakobs seMutevedzeri weMutungamiriri, Kutengesa & Kushambadzira kutarisira iyo Hong Kong-yakavakirwa mutsa manejimendi yekambani yekutungamira. Mubasa rake idzva, Holger achatungamira nekugadzira nzira dzekutengesa nekushambadzira dzeboka kusimudzira mari inobatsira pasi rose paGlobal Sales, Branding & Kutaurirana, Kubatana & Kuvimbika, Kushambadzira kweDigital uye Revenue Management & Distribution.
Akadzidziswa kuGerman uye akapedza kudzidza paMasters kuYunivhesiti yePaderborn, Holger anoenderera mberi nekuvaka basa rinoyevedza nemhando dzemhando yepamusoro dzinosanganisira mabasa emakambani neepfuma neSt Regis, Starwood Hotels neResorts nemaSense Sense kuChina nekuThailand, uko kwaaisanganisira masisitimu. kutumwa, kukudziridza hukama hweakambani yekambani uye kusimudzira ruzivo rwevaeni
Asati ajoina Wharf Hotera, Holger akabata chinzvimbo cheMutevedzeri weMutungamiriri Kutengesa & Kushambadzira Asia kwemakore mashanu kuMövenpick Hotels & Resorts, iri muBangkok, Thailand. Munguva yekambani yakakura nguva, akasimudza tsika yepamusoro yekutengesa uye akatarisa yekutengesa neyekushambadzira kweboka kune iyo iripo portfolio uye gumi nematatu mahotera matsva muAsia Pacific.
“Tinofara kugamuchira Holger semutsva kutsva kuKomiti Yedu Yekutungamira yemhuri yeWhwarf Hotels. Mumamiriro ezvinhu anhasi anokwikwidza, tinotenda kuti Holger achave mutungamiri anokurudzira uye anotungamira kune edu ekutengesa uye kushambadzira kweboka redu anotsigirwa nehungwaru hwehutungamiriri hwetsika yedu, iyo Rin'i Tsvuku, kuti tigare takashinga uye tigare takapinza. Tinotarisira kuwedzera kukura uye kusimudzira zvigadzirwa zvedu naHolger ari iye anotungamira pakutengesa nekutengesa, ”akadaro Dr Jennifer Cronin, Mutungamiri, Wharf Hotels.
“Ndinotarisira kushanda pamwe nechikwata changu chitsva ndichivatungamira kuti vachinje pfungwa pavanenge vachifamba muNiccolo neMarco Polo Hotels kuti vawane mabhenefiti akasimba, anobatsira indasitiri uye nekukanganisa mashandiro eindasitiri. Ndine chivimbo chekuti ndichakwanisa kuendesa mabhenefiti kuti abudirire zvakanyanya uye kuvaka pane chiono cheWhwarf Hotels kugadzira kukosha kwevaenzi vedu nevatinoshanda navo, "akadaro Holger achitambira chinzvimbo chake chitsva.
Panguva yekuzorora, Holger anonakidzwa nemangwanani, uye akatasva Triumph Bonneville T 100 pakupera kwevhiki. Iye zvakare anofarira scuba diver uye baba vakazvipira.
Russia Inotangazve Ndege kuenda kuFrance neCzech Republic